Shiinaha Dhammaan Laabta Qoryaha adag ee Khaanadaha Khaanadaha Fadhiga Guryaha Jiifka Sariirta # 0103 Soo-saar iyo Warshad | Yamazonhome
Dhamaan Laabta Qoryaha adag ee Khaanadaha Qolka Nasashada Qolka Jiifka # 0103
Magaca: Laabta khaanadaha
Lambarka tusaalaha: Amac-0103
Cabir: 600mm * 400 * 960mm
Qaab dhismeedka Tenon iyo tenon + loox adag
Waxyaabaha ugu muhiimsan waa geedkii caddaa ee boqolkii sano la weynaanayay. Waxay leedahay qaab adag, cufnaanta-qalajinta hawada sare, qaabab qurux badan iyo qiime uruurin wanaagsan. Geedka cad ee FAS la soo dhoofiyo, oo ah mid ka mid ah dadka sharafta leh ee ku jira qoryaha, wuxuu leeyahay cimri dherer iyo xasilooni aad u fiican, waana mid gaar ah Nooc alwaax leh oo qoyan oo buur leh wuxuu gudbiyaa adkaysi iyo dabeecad dabiici ah, guud ahaanna golaha wasiirradu way deggan yihiin mana laha gariir. dareen iyo waa raagaya.
Daaweynta wareega wareega
Farshaxanimo farshaxan naqshad wareegsan
Cidhifyada golaha wasiirrada waa la soo koobay oo la soo koobay si wax ku ool ah looga hortago burburka ku soo boodka. Dusha sare iyo dibedda waxaa lagu buufiyaa varnish, ka-hortagga daxalka iyo u adkaysiga biyaha, 360-digrii oo aan lahayn geesaha dhintay, muuqaalkuna waa isku mid. Naqshadaynta fudud ayaa inta badan awood u leh inay iska caabbiso nadiifinta waqtiga, oo leh khadad nadiif ah, midab cad oo fudud, Qaab gaar ah, oo ay ka buuxdo Nordic minimalism.
Taako tayo sare leh
Khaanadaha adag ee alwaaxda leh gacmo naxaas ah waa kuwo fudud oo raaxo leh. Ka dib 50 jeer oo si taxaddar leh loo nadiifinayo, dusha sare ee siman oo aan lahayn jajab, macallinka wax caddaynaya wuxuu si isdaba joog ah u caddeeyay 15 jeer, isagoo abuuraya lakab noocan oo kale ah. Dhinacyada khaanadda khaanadda ayaa lagu hayaa kala-goysyada ballaadhinta, Si hufan u yaraanaya farqiga, si wax ku ool ah uga hortagaya qoryaha inuu dillaaco oo uu xumaado. Gacanta naxaasta adag leh ayaa sii waaraysa mana sahlana in miridhku dhaco.
Khaanado badan oo cabbirro kala duwan leh
Naqshad badan oo naqshadeeyayaal ah, shaqo kaydin xoog badan leh, oo leh, gurigu wuxuu noqonayaa mid hagaagsan oo hagaagsan isla markiiba. Boodhka weyni waa toosan yahay, maaddaduna way buuxsan tahay, mana jiro guddi farta lagu wadaago, oo keydin kara walxaha iyo buugaagta, isla markaana leh firfircooni xoog leh. Waxaa loo isticmaali karaa qaanad jiifka sariirta dhinaceeda, armaajooyinka TV-ga qolka jiifka, qolka fadhiga TV-yada qolka fadhiga, oo leh iskudhafyo kala duwan iyo malaayiin isticmaal ah. Booska khaanadda khaaska ah wuxuu ku siinayaa dareen buuxa oo ammaan ah.
Tareenka hagaha adag ayaa leh iska caabin xoog leh
Jidadka adag ee biraha lagu riixo, alwaaxda jiidan ee kaararka lagu jiito, sawir siman, iftiin iyo aamusnaan, ma fududa in la furfuro, waarana oo xirnaata. Kaadhka kaarka si fiican ayaa loo jaray, sawirku kuma dheggan yahay, waqti iyo dadaal badbaadin, oo si fudud loo qaadan karo
Wax ku ool ah lugaha golaha wasiirada alwaax adag
Lugaha kabadhka adag ee qaro weyn waa kuwo deggan oo aan siibiibi karin, xoog leh oo waara. Raac fikradda naqshadeynta qolka oo dhan oo nashqadee xalka u dhigma ee gurigaaga quruxda badan iyadoo ujeedadu tahay moodel iyo iswaafajin. Gunta hoose waxay leedahay naqshad aan siibiibi ah iyo xirasho u adkaysta, taas oo sahlaysa riixitaanka iyo jiidista. Saamayn kuma yeelan doonto inta kale, ilaalin doonta dabaqa waxayna kordhin doontaa nolosha adeega golaha wasiirada.
Hore: Yolatikada qoob-ka-ciyaarka 'gym yoga gym matlat inflatable track track 0384
Xiga: Dharka Dharka Oak ee Oak Xajinta Silent Slide Rail Sliding Albaabka Dharka Qolalka jiifka # 0108
Bohn Hut wuxuu qaabeeyey Wooden Pet Dog House
Unitarp sabayn buufin Yoga Mat Dadka waaweyn Swi ...
Qaab Casri ah oo Casaan Jaban Jabbaan ah oo Iskujira ...
Afarta xilli ee Wicker Diir Multifunctional Butros Noqo ...
White Oak Multifunctional Double Sariir Sariir adag ...